HomeWararka MaantaBeckham Oo Farxad Ku Gudoonsiiyey Wiilkiisa Biladdii Ugu Horeysay Ee Kubada Cagta ah
Isagoo riyaaqsan isla markaana farxad is hayn la, ayuu wiilkiisa Cruz Beckham gacanta ka saaray bilada dahabka ah ee uu mutaystay kadib markii kooxda uu u ciyaaro inanka yari ee Foxes Fc ay hanatay koobka caruurta da’doodu ka hooseyso 9 jirka.
Beckham oo ku gaashaaman, koofiyad iyo koodh kaaki midabkiisu yahay, kabtankii hore ee xulka qaranka England, wuxuu u raaciyey ubadkaas wiilkiisu ku jiray, gudoonsiinta billada kadib , hambalyo iyo bogaadin hanadashada Horyaalnimada ay qaadeen Subaxnimadii Axadii.
Mudadii uu tartanku socday , waxaa la arkayay David oo u sacab tumaya wiilkiisa Cruz ciyaar kasta oo uu ka qayb qaadanayo , dhiiri gallina la barbar socda innankiisa, sida waalid badan oo kale oo soo xaadiri jirayba yeeli jireen.
David, oo imika 38 jir ah, si weyna loogu xasuusto kubadii uu soo qaloocin jiray , barta uu la maagana aan seegi jirin, yaraantiisii waxa sidan oo kale u soo raaci jiray garoonka Ridgeway Park oo uu tababarka ku samayn jiray , aabihii Ted, isagoo u dhiiri gallin jiray si lamid ah sida uu maanta caruurtiisa ugu dhiiri gallinayo kubada cagta.
Dhiirigalinta Aabe Beckham iyo Hooyo Victoria , ayaa Todobaadkan midho dhashay kadib markii wiilkood Cruz iyo xulka uu u ciyaaro ee Foxes FC ay hantiyeen koobka awlaada da’doodu 9 jirada ka hooseyso.
Ricardo Kaka: “Waxaan Ahay Laacibkii Ugu Dambeeyay Ee Dunidan Ku Dhasha Kaas Oo Ku Guuleysta Ballon d’Or, Ronaldo Iyo Messi Iyagu Waxay Ka Yimaadeen Dunni Kale”
19/09/2015 Samatar Mohamed
Atletico Madrid Oo Bartilmaameed sanaysa Javier Hernandez
Barcelona Oo Aabahay Goblan Ku Dhaaftay Atletico Madrid – Muuqaalo